Akụkọ banyere Canarian: Site na San Borondón ruo onye ndu nwere obi ike Tanausú | Akụkọ Njem
Akụkọ banyere Canary
Louis Martinez | | omenala, Islands
na akụkọ ọdịnala Ha na-agwa anyị banyere oge gara aga nke ndị ndu Guanche dị ike bi na agwaetiti, banyere akụkọ ịhụnanya na njedebe dị egwu na ọbụnadị banyere akụkọ ifo na ihe ọhụụ nke ihe ndị na-efe efe.
Agwaetiti Canary abụrụla mpaghara na oke akụkọ ọdịnala na akụkọ mgbe ochie. Anyị nwere ike ịchọta ha na agwaetiti ọ bụla, site na Tenerife na Lanzarote (ebe a ka anyị hapụrụ gị otu isiokwu banyere ihe ị ga-ahụ na ya) na site La Palma elu Gwè ahụ. Ha bụ akụkọ sitere n’otu ọgbọ ruo n’ọgbọ n’enweghị ezi nkwado na nke sokwa na ibe omume nke ndi ya. E nwere ọtụtụ akụkọ mgbe ochie anyị nwere ike ịgwa gị, mana anyị ga-anwa ilekwasị anya na ndị kachasị ama. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ha, anyị na-akpọ gị oku ịga n’ihu n’ịgụ ihe.
1 Akụkọ banyere Canarian, site na akụkọ ifo Guanche ruo ugbu a
1.1 Tanausú, onye ndu obi ike nke La Palma
1.2 Garajonay, ebe kachasị amasị akụkọ ọdịnala Canarian
1.3 Mkpu Ferinto
1.4 Ọbụbụ ọnụ nke Laurinaga ma ọ bụ ihe kpatara Fuerteventura ji akpọnwụ
1.5 Ekwensu nke Timanfaya, akụkọ banyere Canarian banyere aloe vera
1.6 Agwaetiti San Borondón, akụkọ kachasị ewu ewu Canarian
Akụkọ banyere Canarian, site na akụkọ ifo Guanche ruo ugbu a
Anyị ga-amalite nyocha anyị banyere akụkọ ọdịnala Canarian dị n'oge nke ndị bi na agwaetiti oge ochie iji gwụ na nke ọzọ ka dị ugbu a. N'okwu a, anyị na-ekwu maka ya agwaetiti San Borondón.
Tanausú, onye ndu obi ike nke La Palma
Caldera de Taburient
Mmeri nke La Palma maka okpueze Spanish na 1492. N’ọnwa Septemba, ọ rutere agwaetiti ahụ Alonso Fernandez de Lugo ya na ndị agha ya. O zutere ọtụtụ ihe mgbochi ruo mgbe ọ ga-eche ndị bi na ya ihu Nchara, obodo dị na caldera de Taburiente.
Onye ndu ya bụ Tanausu, ndị ya na ndị ya ji nkume na akụ́ gbajie ala ahụ gbara gburugburu. Ebe ọ bụ na ha enweghị ụzọ isi merie ya, ha chepụtara ọnyà. Fernández de Lugo mere ka o kwenye izute ya ma bịanye aka na nkwekọrịta udo.
Agbanyeghị, mgbe ha rutere, e jidere onye ndu ahụ wee kpụrụ ya banye na Peninsula dị ka ihe ngosipụta nke mmeri ya. Ma, Tanausú ekweghị eri nri. Naanị kwuru «Vacaguaré», nke pụtara na m chọrọ ịnwụ. Ihe a merenụ wee lie ya n’oké osimiri.
Kaosinadị, akụkọ a na-ekwu na, mgbe ọ nwụsịrị, mkpụrụ obi onye agha ahụ laghachiri n'ala ya wee bụrụ onye fosilis n'ala ya. Caldera de Taburiente, ebe ọ chịrị. Ndị obodo na-ekwu na onyinyo nke ugwu a na-eweghachi onyinyo nke obi ike Tanausú.
Garajonay, ebe kachasị amasị akụkọ ọdịnala Canarian
El Garajonay ogige mba ogide nnukwu akụkụ nke agwaetiti La Gomera. Ọ gụnyere oke ọhịa ahịhịa ahịhịa laurel na ahịhịa nwere ihe ùgwù emeela ka a kpọsaa ya Ihe Nketa Uwa. Ikekwe maka nke a, ọ bụ ebe dị mma maka akụkọ akụkọ Canarian. Enwere ole na ole na-ewere ya dị ka ọnọdụ, mana anyị ga-agwa gị nke na-ekwu banyere ụdị Ndị Romeo na Juliet Islanders nke nyere ogige ahụ aha ya.
Agbụrụ bụ ada eze nke La Gomera, mgbe Jonay ọ bụru eze ndu Tenerife. Ha abụọ hụrụ n'anya mgbe nleta si mmachi (ma ọ bụ eze) nke Adeje, onye nwa okorobịa ahụ bụ nwa ya. Ha laghachiri n'ala ha, mana Jonay enweghị ike ichefu ọmarịcha aristocrat.
Ya mere, ọ gafere osimiri na-eji floats nke akpụkpọ anụ ewu fụrụ akpụ na-ajụ maka aka ya. Ọ bụ ezie na nwa agbọghọ ahụ nwere mmasị n'ebe ọ nọ, ọ ghaghị ịjụ ya n'ihi ugwu mgbawa ahụ Echeyde malitere chụpụ ọkụ. Buru n'uche na Gara bụ ada eze Agulo ma ọ bụ "mmiri" na ndị ụkọchukwu ya nyere iwu na enweghị ike inye ịhụnanya n'etiti mmiri na ọkụ.
Maka nke a, Gara na Jonay gbagara n'oké ọhịa ebe, na-achọsi ike n'ihu ndị na-achụ ha, ha gburu onwe ha n'ụzọ ịhụnanya. Ha were osisi cedar, fesie ya ike n’akuku ya abua, debe ya n’ebe di elu nke obi-ha, makua onwe-ha, tukwasi ya n’elu ya. Ya mere, mmakọ ikpeazụ ha mere ka ha dịrị n'otu ruo mgbe ebighị ebi ugbu a bụ Garajonay Park.
Isuo nke El Hierro
Akụkọ akụkọ banyere Canarian a na-akpọrọ anyị oge mgbe peninsular gbalịrị iweghara agwaetiti El Hierro. Ndi nwe obodo, ndi amara dika bimbachHa na-eguzogide isi ike.
Dike di ike aha ya Ferinth. N'oge na-adịghị anya ọ ghọrọ onye ndu otu kpatara ọtụtụ isi ọwụwa nye ndị na-achị ala, n'aka nke ya na-edu John nke Bethencourt. Nnukwu uru ha bara bụ na ha ma okporo ụzọ na ugwu El Hierro dị ka azụ aka ha.
Mana, dịka o mere ọtụtụ oge, Ferinto raara onye nke ya nye. N'ihi amamikpe ahụ, a gbara onye agha ahụ gburugburu wee nwaa ịgbalaga ruo mgbe ọ ruru na ndagwurugwu miri emi. N'ịbụ onye nwere atụmanya nke ijide ya, ọ masịrị ya gbuo onwe gị bahụkwa l'ọnu-ọguzo mkpu ákwá dị otú ahụ a nụrụ nke ahụ n’agwaetiti ahụ dum. Ọbụna nne nke ya nụrụ ya wee si otú a mara na ọ nwụọla.
Ọbụbụ ọnụ nke Laurinaga ma ọ bụ ihe kpatara Fuerteventura ji akpọnwụ
Ala mmiri Fuerteventura
Agwaetiti nke Fuerteventura bụ, ya na onye agbata obi ya bụ Lanzarote, nke kpọrọ nkụ nke Canary Islands. Dabere na akụkọ ifo, nke a nwere nkọwa sitere n'akụkọ banyere ụfọdụ ọdachi ndị Greek.
Mgbe mbata nke peninshurs ahụ, Maazị Pedro Fernández de Saavedra ọ ghọrọ onye nwe Fuerteventura. O nwere mmekorita ya na nwa amaala aha ya Laurinaga nke amuworo nwa. Agbanyeghị, dịka ọ na-eme mgbe ahụ, aristocrat ahụ lụrụ nwanyị nke ọkwa ya dị mma nke ya na ya nwere ọtụtụ ụmụ.
Mgbe ha na-achụ nta, otu onye n’ime ha aha ya bụ Luis nwara idina otu nwata nwaanyị n’ike. Mana onye oru ugbo nke di nso gbochiri ya. Mgbe ahụ, Don Pedro gburu ya iji chebe nwa ya nwoke. Otu agadi nwanyị bịarutere, onye kwuru na ya bụ nne onye ọrụ ugbo ahụ. Ma, ọ bụghị naanị nke ahụ, nwanyị a gwara Don Pedro na ya bụ Laurinaga nakwa na nwa okorobịa ahụ o mere ka e gbuo bụ nwa nke ya, nke ha abụọ nwere na mbido akụkọ a.
Ọzọkwa, Laurinaga mere nkọcha n'àgwàetiti ahụ n'ihi nke Fuerteventura ghọrọ ọzara.
Ekwensu nke Timanfaya, akụkọ banyere Canarian banyere aloe vera
Ekwensu nke Timanfaya
Kedu ka ọ ga - esi bụrụ na ọ bụghị, ọdịdị ugwu mgbawa nke Canaries emeela ka ọtụtụ akụkọ ifo metụtara ma ọpụpụ na usoro ọgbụgba egwu nke onye mbụ mepụtara.
Otu n'ime ha nwere ihe jikọrọ ya na Timanfaya ugwu mgbawana Lanzarote. Otu n’ime nhụsianya ndị kasị jupụta na ugwu ya mere na September 1730, XNUMX, rikpuru otu ụzọ n’ụzọ anọ nke àgwàetiti ahụ. N'ụzọ dị mwute, e mere agbamakwụkwọ n'ụbọchị ahụ n'akụkụ ugwu mgbawa.
Nnukwu okwute tụrụ mkpọrọ nke Vera, enyi nwanyị. N'agbanyeghị nnukwu mgbalị nke Aloe, nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ, onye ọ hụrụ n’anya nwụrụ. Mgbe ahụ, onye a malitere ịgba ọsọ ma jiri egbe nwere akara aka ise na-aga na ụzọ nke Timanfaya ruo mgbe ọ funyụrụ nke ugwu na-agbọpụta ọkụ rikpuru. Dị ka ihe ncheta banyere ọdachi ahụ, osisi bara uru na-eto na ogige mba nke emere gburugburu Timanfaya, kpomkwem iji gwọọ ọkụ: nke aloe vera.
N'aka nke ọzọ, ọnụ ọgụgụ a maara dị ka Timanfaya ekwensu nke bụzi onyonyo nke ogige ahụ bụ maka aloe na-eto eto. Mana ọ bụghị n'ihi omume ọjọọ ya, kama ọ bụ n'ihi na ndị ọbịa agbamakwụkwọ ahụ, na-ahụ ka onyinyo ya gosipụtara na nnabata nke lava na kwa ọdachi ya, mara ya ikpe. "ekwensu dara ogbenye!".
Agwaetiti San Borondón, akụkọ kachasị ewu ewu Canarian
Renaissance ụwa map na-egosi n'àgwàetiti San Borondón
Anyị ahapụwo maka njedebe nke njem anyị site na akụkọ akụkọ Canarian onye onye ọhụụ bụ agwaetiti mmụọ nke San Borondón, ebe ọ bụ na ọ nwere ike bụrụ ihe kachasị ewu ewu na ha niile.
A makwaara ya maka "ọnwụ" y "Ndị enchanted". Maka na obu agwaetiti na-apụta ma na-apụ n'anya. Oge ụfọdụ ọ naghị ekwe ka ekpudo hụ silhouette ya na mbara igwe. Kaosinadị, ịgba akaebe mbụ nke ịdị adị ya sitere na Ochie, mgbe ndị omenkà Castilian kwurula ya.
Ọzọkwa, na 1479 ndị ọchịchị Spain na Portugal bịanyere aka na ya Nkwekọrịta nke Alcáçovas, nke e si kesaa mmiri na ala nke Oké Osimiri Atlantic. N'ime akwụkwọ a, akọwapụtara ya nke ọma na San Borondón bụ nke agwaetiti Canary.
Dabere na ndị na-ese foto n'oge ahụ, a ga-ahụ agwaetiti ahụ n'ime triangle nke La Palma guzobere (lee otu isiokwu banyere nke a), El Hierro na La Gomera. Na ihe kasị adọrọ mmasị bụ na ọ gaghị adị ọ dịghị ihe dị obere. Ọ ga-abụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị kilomita ise n’ogologo na ihe dị ka otu narị na iri ise na iri ise na ise.
Enweela okwu banyere ngbanwe ya. Ọ ga-abụ concave na etiti ya, ebe, n'akụkụ, ugwu abụọ dị mkpa ga-ebili. N'ezie, n'ime ọtụtụ narị afọ gara aga, ọtụtụ mmadụ emeela njem iji chọta ya. N'ime ha, nke ahụ bụ Ferdinand nke Viseu, na narị afọ nke iri na ise, nke nke Hernan Perez de Grado ife nke Gaspar Dominguez.
Otú ọ dị, ọ dịghị onye chọtara agwaetiti San Borondón. Akaebe kachasị ọhụụ nke ọhụụ ya ka enyere na etiti narị afọ nke 1958. Na XNUMX, kwa ụbọchị ABC mara ọkwa na ọ na-ese foto nke mbụ.
Na mmechi, anyị egosila gị ụfọdụ ndị kachasị ewu ewu ma na-atọ ụtọ akụkọ ọdịnala. Agbanyeghị, anyị ahapụbeghị ụfọdụ na pipeline. Dịka ọmụmaatụ, nke nke adaeze tenesoya nke Gran Canaria, ndi ndi Castnapuloro ya ma mee ka ha luru onye isi ala; nke Anaga ndi amoosu, onye haziri ọgbụgba ndụ n'etiti osisi dragon dị nsọ, ma ọ bụ nke violet nke elu ọnụ, nke a na-amụ n’oge opupu ihe ubi ọ bụla na Roque de los Muchachos dị ka ihe ncheta nke akụkọ ịhụnanya dị egwu. Younu echeghi akuko juputara n’olu okwu na echiche efu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Islands » Akụkọ banyere Canary
Kedu ihe bụ uwe ndị Mayan